Football Khabar » पहिलो हाफ : घरेलु मैदानमा लेगानेस १–० ले अघि !
पहिलो हाफ : घरेलु मैदानमा लेगानेस १–० ले अघि !
स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा अहिले लिग लिडर बार्सिलोना र लिगको सबैभन्दा पुछार २०औं स्थानको लेगानेसको भिडन्त जारी छ । लेगानेसको घरेलु मैदानमा जारी खेलको पहिलो हाफमा लेगानेसले १–० को अग्रता लिएको छ । आफ्नो घरमा आक्रामक खेल खेलिरहेको लेगानेसका लागि खेल सुरु भएको १२औं मिनेटमै युसुफ इन–नेसरीले शानदार गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाए । उनले रोक्यु मेसाले दिएको पासमा बल बक्स लाइनमा पुर्याएर बार्सिलोनाका २ जना डिफेन्डरलाई छलाएर हानेको बुलेट प्रहारले सोझै जाली चुमेको थियो । उनको प्रहार बार्सिलोनाका गोलरक्षकले रोक्न प्रयाससम्म गर्न भ्याएनन् ।
पहिलो हाफमा घरेलु टोली लेगानेस बार्सिलोनाविरुद्ध निकै बलियो देखिएको छ । उसका डिफेन्डरले बार्सिलोनाका सबैजसो मुभ निस्तेज पारिदियो । बार्सिलोनाको आक्रमण लाइनमा आज एकसाथ कप्तान लिओनल मेस्सी, लुइस स्वारेज, एन्टोनी ग्रीजम्यान र उसामान डेम्बेले खेलिरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति ७ मंसिर २०७६, शनिबार १८:२६